Dhawunirodha 12 Mahara Mahara kweNguva Yakatemerwa neCalligraphic Fonti | Ndinobva mac
Dhawunirodha ma fonti emahara gumi nemaviri kwenguva yakati rebei neCalligraphic Fonts
Kana tichigadzira zvinyorwa, mabrochure, maposta kana chero imwe mhando yegwaro, macOS inotipa nhamba hombe yemafonti aripo, mafonti atinogona kushandisa uye anotipa mhedzisiro inoshamisa. Asi dzimwe nguva, tinoda imwe mhando ye typography, kungave nekuti mutengi anoida kana nekuti iri chaizvo ndiyo typeface inoenderana segirovhosi kubasa ratiri kuita.
Muzviitiko izvi, Mepu App Store inotipa akasiyana mafomu nema fonti, asi kunze kwayo, tinogona zvakare kushanyira mapeji epawebhu kwatinogona kunyange kuisa muyenzaniso weiyo calligraphy yatiri kutsvaga, kuti igone kuwanikwa uye Tiratidze zvazviri chaizvo kuti gare gare titenge kana kurodhaunura mahara, zvichienderana nekuwanikwa kwaro.
Nhasi tiri kutaura nezveCalligraphic Fonts, pasuru yemafonti gumi nemaviri, mafonti atinogona kushandisa mune chero gwaro ratinogadzira paMac yedu, kungave neMapeji, Hofisi, Photoshop, Pixelmator ... mafonti ese atinopa anogona kubatsira mune ramangwana, isu tinofanirwa kuaisa pane yedu Mac.Uku kuita izvi isu tinongofanirwa kubaya bhatani Shandisa mafonti. Asi zvakare inotipa mukana wekugovana navo nevamwe vanhu kuburikidza nebhatani Sevha ese mafaira emafaira.
Iwo mafonti maviri atinopihwa mahara neCalligraphic Fons yemahara kwenguva yakatarwa ndeaya:
Chancellerie Moderne Anorema
GrandBes Bold Italiki
GrandBes Makapu Mashoma
Tsamba dzese idzi dzinogona kushandiswa mahara mune chero gwaro, kungave kugadzira marogo kana dhizaini, shandisa mumabhuku emagetsi ... Calligraphic Fonts inoda zvishoma kupfuura 5 MB pane yedu Mac, inoda macOS 10.7 kana gare gare uye mutengo wayo wenguva dzose ndi4,99 euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Dhawunirodha ma fonti emahara gumi nemaviri kwenguva yakati rebei neCalligraphic Fonts
Safari Technology Preview 32 inogadziridzwa nenhau dzeSafari muMacOS High Sierra